Dumbbell bhora imbwa toyi, Inopindirana imbwa toyi, Chikafu chinopa, Pet Supplies, Chew matoyi, Imbwa chikwesheso -dogstore-Chinese,China,Manufacturer,Supplier,Factory,Price
Shona language Dumbbell bhora imbwa toyi, Inopindirana imbwa toyi, Chikafu chinopa, Pet Supplies, Chew matoyi, Imbwa chikwesheso
Iyi toyi yemhando yepamusoro yeimbwa, ine tsvimbo yemolar uye mabhora maviri ekupa mabhora.
Ichi chigadzirwa hachigone kungorerutsa kushushikana kwembwa, asi zvakare kukudziridza kungwara kwembwa.
Iyo zvakare inogona kushandiswa kubvisa imbwa yemazino Calculus kuburikidza neino zino kukuya basa kweiyo toy painotambwa nembwa, inonyatso chengetedza iyo imbwa s yemuromo hutano.
Ichi chigadzirwa chakagadzirwa nesu pachedu.
Chikafu chinopa bhora chine makumi matatu-madhora akazara-akavharirwa mamolar protrusions, ayo anoshanda nemazvo, saka anogona kuchenesa-peta mazino echipfuyo sezvinoita bhurasho revanhu.
Chikamu chekucheka chetsvimbo yemolar uye zvakaputika mamolar protrusions zvakagoverwa muhukuru hwakasiyana.
Uye iyo ichangobva kugadzirwa cuspid molar chiteshi yakanyanyisa kupfuura zvigadzirwa zvakafanana, izvo zvinogona kunyatso suka imbwa yemolar, incisor uye tine.
Iyo yekutanga dhizaini yezino ichikuya chiteshi inogona kukurumidza kubvisa mazino kuverenga uye tsvina kuvimbisa imbwa yako s mazino hutano mineti yega yega uye sekondi yega yega.
Chikafu chembwa kana zvidyiwa zvinogona kuiswa mubhodhi rekupa chikafu kuwedzera imbwa s kufarira kutamba.
Ichi chigadzirwa chinogona zvakare kushandiswa sekutamba-kwehondo-toyi imbwa mbiri kuti dzitambe dzichipindirana panguva imwe chete, izvo zvinogona kukurudzira kunakidzwa, kurovedza muviri uye kugadzirisa kugwinya kwemuviri.
Saizi yechigadzirwa: molar tsvimbo: 5.9 * 2 inches / molar bhora: 3.1 inches, 8.1 oz
Pasuru: 70 pcs pabhokisi, 18.7 × 18.7 × 19.88 inches, 45.64lb
Игрушка для собак, Игрушка-пазл для собак, Игрушка для раздачи еды, Интерактивный шарик для собаки, Принадлежности для собак
Особенности: Это многофункциональная игрушка для собак, сочетающая в себе функции игрушки, раздачи пищи, взаимодействия с владельце
Шошқа тәрізді сорғышқа арналған сүйкімді ойыншық
Мүмкіндіктер:√√√√Бұл өнім иттердің тістерін тегістеп қана қоймай, иттің ауыз қуысы мен қуысының денсаулығын сақтауға мүмкіндік б